PMC မိတ်ဆက် IB2S Active ကိုစတူဒီယိုမော်နီတာ၏နယူးမျိုးဆက်ကျောင်းသားများ - NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့်ဘိ, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » သတင်း » IB2S Active ကိုစတူဒီယိုမော်နီတာ၏ PMC မိတ်ဆက်နယူးမျိုးဆက်ကျောင်းသားများ
IB2SAXBD_Front-3_4-4-Part_ + G.fff ။
ပိုများသောပါဝါပိုမိုအသေးစိတ်နှင့်ပိုပြီးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သူတို့ PMC ရဲ့အသစ် IB2S-AII နှင့်အမွှာကက်ဘိနက် IB2S XBD-AII ရည်ညွှန်းမော်နီတာပိုမိုလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အတွက်လာသောအခါအရှိဆုံးပိုင်းခြားသိမြင်ဂီတထုတ်လုပ်သူရ attribute တွေဖြစ်ကြသည်။
ရည်ညွှန်းခြင်းနှင့်ကျွမ်းကျင် application များအတွက် - ဒီဂျစ်တယ်သွင်းအားစုနှစ်ခုလုံးကိုအတူ - PMC ရဲ့ထုတ်ဝေ IB2S တက်ကြွအကွာအဝေး၏ဤမျိုးဆက်သစ်စစ်မှန်တဲ့ High-end စောင့်ကြည့်ရေးလိုအပ်သူကိုစတီရီယိုနှင့်ပတ်လည်ကို formats တွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသုံးပြုသူများကရည်ရွယ်သည်။
ယခင်ကြားမှာမတူဘဲ, အ IB2S-AII နှင့် IB2S XBD-AII 3U ထိန်သိမ်းတရံပုတစ်ခုတည်းကက်ဘိနက်ဝန်ကြီးများအဖွဲ့က IB2025S XBD- များအတွက် IB2S-AII နှင့် 3225W များအတွက် 2W ပို့ဆောင်အစွန်း DSP-controlled အတန်းအစား-D ကို amplification ဖြတ်တောက်ကွန်တိန်နာထိုချန်နယ်နှုန်းအီလက်ထရွန်းနစ်တပ်ဆင်ထား feature AII အမွှာကက်ဘိနက်ဗားရှင်း။ ပါဝါ၌ဤတိုးလာပုံပျက်ကိုလျော့နည်းစေတယ်လေနှင့်ပိုမိုဘေ့ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်, တိုက်ခိုက်မှုနှင့်တိုးချဲ့ headroom အတူမော်နီတာအကျိုး။ Off-ဘုတ်အဖွဲ့အိမ်ရာအဆိုပါအီလက်ထရွန်းနစ်အသုံးဝင်မှုရှိစေရန်သိသိသာသာ soffit mounting အထူးသဖြင့်အခါ, တိုးပွါးကြောင်းဆိုလိုသည်။ တစ်ချိန်က RJ45 စားပွဲပေါ်မှာ-ထိပ်တန်းဝေးလံခေါင်သီချိတ်ဆက်မှတဆင့်မော်နီတာ၌ရှိသမျှသောထိန်းချုပ်မှုကိုဖန်ဆင်းနိုင်ပါတယ်အဖြစ်၎င်းတို့၏နောက်ဘက်ပြားဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရန်မလိုအပ်လည်းမရှိ installed ။
သုံးလမ်း IB2S-AII မာစတာကက်ဘိနက်ဝန်ကြီးများအဖွဲ့က IB2S XBD-AII သည့်စနစ်ဖွဲ့စည်းရန်အတူတကွ Single-ကားမောင်းသူ XBD ဘေ့ဝန်ကြီးအဖွဲ့နှင့်အတူ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ညာဘက်မှာရှိတဲ့စပီကာအဖြစ်ဝယ်ယူခြင်းသို့မဟုတ်နိုင်ပါသည်။ တစ်ဦး 10 လက်မအရွယ် Carbon-fiber / Nomex ™ပစ္စတင်တစ် 75mm ထည်အမိုးခုံးနှစ်လယ်ပိုင်းနှင့်တစ်ဦးချင်းစီကက်ဘိနက်ထဲမှာ 34mm ပျော့-မိုးခုံး tweeter - နှစ်ဦးစလုံးစနစ်များ PMC ရဲ့လက်-built ကြိုတင်ပြင်ဆင် drivers တွေကိုပါရှိပါတယ်။ နှစ်ဦးစလုံးစနစ်များအားလုံးအဆင့်ဆင့်မှာလက်မှတ်တိကျစွာဘေ့များအတွက်စီးပွားဖြစ် ATL ™ (Advance ဂီယာလိုင်း) ဘေ့စ-တင်နည်းပညာပါရှိပါတယ်။
နှစ်ဦးစလုံးစနစ်များလည်းစံအဖြစ်, ± 8dB input ကိုအဆငျ့လျနှင့်တစ်ဦး AES3 ဒစ်ဂျစ်တယ် input ကို filter များစင်လုပ်ရန်အသုံးပြုသူ-ချိန်ညှိ HF နှင့် LF ပါရှိပါတယ်။ တစ်ဦး RJ4 မှတဆင့်ဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်အားလုံးပေးသောများ၏မျှတသော analogue သွင်းအားစုများ၏ input ကို sensitivity ကို + 16dB မှ + 45dB ထံမှကိုလည်းချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်, ဝေးလံခေါင်သီချိတ်ဆက်
ဒီစနစ်သို့ထည့်သွင်းအဆိုပါ Single-ကားမောင်းသူ XBD ဘေ့ကက်ဘိနက်ထူးခြားဆန်းပြားတဲ့ resolution နဲ့ 2Hz ဆင်းအနေနဲ့အတော်လေးချောမွေ့တုံ့ပြန်မှုကယ်လွှတ်ခြင်းငှါ LF headroom ၏ + 3dB ထပ်ပြောသည်အဖြစ်ပိုကြီးတဲ့အခန်းများနှင့်အတူဖောက်သည်အဘို့, IB20S XBD-AII ပြီးပြည့်စုံသောဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါနှစ်ဦးကိုပုံးနောက်တဖန်သူတို့၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်တိုးမြှင့်တစ်ဒေါင်လိုက်သို့မဟုတ် side-by-side format နဲ့တပ်ဆင်ထားနိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ IB2S-AII နှင့် IB2S XBD-AII မတ်လ 2019 ကနေတင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, www.pmc သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး speakers.com.
PMC, လော်စပီကာစနစ်များတစ်ဦးကိုဗြိတိန်အခြေစိုက်ကမ္ဘာ့-ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါတယ်အားလုံး Ultra-အရေးပါပရော်ဖက်ရှင်နယ်စောင့်ကြည့်ရေးပလီကေးရှင်းရွေးချယ်မှု၏ tools များနှင့်လည်းသူတို့ကမှတ်တမ်းတင်အနုပညာရှင်ရဲ့မူလရည်ရွယ်ချက်သို့ပွင့်လင်းပြတင်းပေါက်များကိုအဘယ်မှာရှိအိမ်တွင်ပိုင်းခြားသိမြင် audiophile များအတွက်။ PMC ထုတ်ကုန်ပထမဦးဆုံးဖန်တီးသည့်အခါကဖြစ်အတိအကျအဖြစ်ပစ္စုပ္ပန်အသံနဲ့ဂီတအသံချဲ့စက်ကိုဖန်တီးရန် amplification နှင့်အဆင့်မြင့် DSP နည်းစနစ်-အစွန်းဖြတ်တောက်, ကုမ္ပဏီ၏စီးပွားဖြစ်အဆင့်မြင့်ဂီယာ LINE (ATL ™) ဘေ့စ-တင်နည်းပညာအပါအဝင်အကောင်းဆုံးရရှိနိုင်သည့်ပစ္စည်းများနှင့်ဒီဇိုင်းအခြေခံမူအသုံးပြု , အမြင့်ဆုံးဖြစ်နိုင်သမျှ resolution နဲ့များနှင့်အရောင်သို့မဟုတ်ပုံပျက်ခြင်းမရှိဘဲ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ client နှင့်ထုတ်ကုန်အပေါ်ပိုမိုသိရှိလိုပါကတွေ့ www.pmc-speakers.com.
whitenoise အားဖြင့်နောက်ဆုံးပေါ်ရေးသားချက်များ (အားလုံးကြည့်ရှု)
axon အလုံးစုံစစ်ဆေးပြုပြင်ဖို့၎င်း၏အဖော်ကွန်ယက် 10 နယူးချိန်းညောအားဖြင့် - စက်တင်ဘာလ 12, 2019
axon IBC 2019 ရန် Cerebrum ၏အမှတ်တံဆိပ်နယူးဗားရှင်းများရရှိစေ - စက်တင်ဘာလ 12, 2019
ဆားဘီးယားနှင့်ခရိုအေးရှားခုနှစ်တွင် DPA မိုက်ခရိုဖုန်းကိုခနျ့အပျဖြန့်ဖြူး - စက်တင်ဘာလ 11, 2019
ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor IB2S XBD-AII IB2S-AII PMC Speakers စတူဒီယိုစောင့်ကြည့်	2019-02-11
ယခင်: Video Editor
နောက်တစ်ခု: Quicklink စတူဒီယိုဂုဏ်သတင်းအင်္ဂလိပ်ဘောလုံးကလပ်များအတွက်သီးသန့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းထုတ်လွှင့်